FDA kwadoro ọgwụ ọhụrụ maka ụmụaka nwere ADHD
Na Machị 2, US FDA akwadoro ọgwụ ọgwụ ọhụrụ (NDA) maka AZSTARYS (aha koodu: KP415), otu ugboro n'ụbọchị, maka ọgwụgwọ ọrịa anya mpe mpe mpe anya (ADHD) na ndị ọrịa 6 afọ na okenye. Ga-ere ahịa na United States. Iji AZSTARYS bụ onyinye ọgwụ capsule f ...
Na-ele anya n'ihu na usoro izugbe nke akụ na ụba ọgwụ nke China na 2021
Na ngụkọta nke mgbake nwayọ nwayọ, ụfọdụ ngalaba mpaghara ka enwetabeghị ọrịa ahụ. Site na Jenụwarị ruo Ọktọba, ego nke ụlọ ọrụ nkwadebe kemikal gbadara site na 4.3% kwa afọ, na uru dabara na 9.3%. Ihe ruru ọkara nke net uru nke ụlọ ọrụ ndị edepụtara aha ha furu efu ...
A mara ọkwa Nrite Nobel na Physiology ma ọ bụ ọgwụ 2020!
Na Ọktọba 5, dị ka akụkọ si bipụta na weebụsaịtị webụsaịtị nke Nobel Prize, 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine merie ndị ọkachamara atọ meriri. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị mmeri atọ ahụ mere nchọpụta ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ, mata nje ịba ọcha n'anya nke C, mere ka ọbara gbaa akaebe ...